Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, Messages iyo More ka Samsung si iPhone
Waxaad ahaayeen taageere Samsung ah oo go'aan ka soo qaado iPhone ah, sida iPhone 6s, isbedel ah? Si kastaba ha ahaatee, samaynta xidhiidh ka dhexeeya iPhone iyo Samsung waa hab dhameystiran oo dheer, ay sabab u tahay dhufto ee kala duwan. Kala beddelashada xiriirada ka Samsung si iPhone noqon kartaa dhibaato ugu horreeya ee aad la kulantay. Careysan oo ku saabsan xaqiiqda? Kalsoonow, kac. Halkan waa xal wanaagsan oo awood aad si aan xiriirada kala iibsiga kaliya, laakiin nuqul ka videos, sawiro, jadwalka taariikhda, farriimo music iyo qoraalka ka Samsung si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS, iyo qeybsanaan effortlessly. Halkan waxa kale oo waa hage buuxa oo ku saabsan sida aad si fudud oo si nabad ah ku wareejin karaa macluumaadka u dhexeeya wax telefoonada gacanta.
Waxaad u Baahan si ay u gudbiyaan Xiriir
Your qalab Samsung & iPhone
Laba USB fiilooyinka
Xalka Mid ka mid ah: Iibsiga Samsung Xiriirada inay iPhone la Google Account
Haddii aad u baahan tahay oo kaliya si ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay iPhone, tani waxay noqon kartaa arrin fudud iyo sidoo kale lacag la'aan ah. Sida aynu wada ognahay, waxaan had iyo jeer isticmaalaan xisaab Google si ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda ka Play Google taas oo macnaheedu yahay inta badan oo inaga mid ah ku leedahay xisaabta Google ku saabsan gacanta. Iyada oo taageero u ah, waxaan si fudud u wareejin karaan xiriirada ka mid ah telefoonada Android inay iPhone (iPhone 6s iyo iPhone 6s Plus ka mid ah). (Sidoo kale eeg: sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay Android .)
Halkan waxaa ku tillaabooyinka fudud ee aad raaci karaan si ay u gudbiyaan xiriirada si iPhone:
Tag Settings iyo dooran Account ama doorasho simliar.
Ku qor faahfaahinta xisaabtaada Gmail iyo awood .Wadashaqayntaas ah, xiriir taleefan aad waa in ay bilaabaan in ay u hagaagsan in Google Xiriirada.
Markaas tag iPhone iyo dooran Settings> Mail, Xiriirada, Jadwalka iyo nooca faahfaahinta xisaabtaada Gmail.
Dhawr ilbiriqsi ka dib, waxaad ka heli kartaa xiriirada Samsung oo dhan waxaa lagu wareejiyay aad iPhone.
Fiiro gaar ah: Hubi Xiriirada waxaa u suurta on this xisaab Gmail.
Xalka Labaad: Transfer Xiriirada ka Samsung si iPhone la Wondershare MobileTrans
Haddii aad rabin kaliya si ay u gudbiyaan xiriirada, laakiin sidoo kale faylasha kale sida SMS, video, Music inay iPhone , Wondershare MobileTrans waxay noqon kartaa sida ugu hufan oo fudud si loo gaaro in. Iyada oo kaliya dhowr qasabno fudud, dhammaan faylasha Android si fudud u dhaqaaqay laga yaabaa in aad iPhone.
Bedelka xiriirada ka Samsung si iPhone la magaca shirkadda, jagada shaqada, cinwaanka guriga, cinwaanka email, iwm
Copy SMS, music, videos, jadwalka iyo sawiro ka Samsung si iPhone.
Beddelaan music video iyo in iPhone qaabab saaxiibtinimo.
Xawaaraha kala iibsiga Fast aan khasaaro tayada wax.
Taageerada Samsung qalab socda Android 2.1 iyo ka dib, iyo iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS ku salaysan arrimo 9/8/7/6/5.
Tallaabada 1. Run Desktop ah Wondershare MobileTrans
Burcad desktop-ka Wondershare MobileTrans on PC. Waxaad arki doonaa suuqa kala aasaasiga ah sida soo socota. Guji "Phone in Transfer Pone".
Tallaabada 2. Isku Your Samsung oo iPhone in Computer
Connect aad Samsung telefoonka ama kiniin oo iPhone ay u computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. Ka dib markii la aqoonsado, Wondershare MobileTrans muujiyaan doonaa Samsung telefoonka ama kiniin uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: In si loo soo wareejiyo Samsung xiriirada si iPhone, waxaa idinku waajib ah si loo soo dajiyo Lugood. Kaliya sidan kuu soo gudbin karaa xiriir si habsami leh.
Tallaabada 3. Nuqul SMS, Music, Video, Photos, Calendar iyo Xiriirada ka Samsung si iPhone 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
By default, dhammaan waxyaabaha aad ku wareejin kartaa ayaa la hubinayaa. Waxaad uncheck karaan faylasha aadan rabin in lagu wareejiyo, kaliya hubi xiriir haddii aad u baahan tahay oo kaliya iyaga.
Markaas, waxaad tagtaa riix Start Copy in ay bilaabaan in ay u guuraan file (s) sida xiriirada ka Samsung si iPhone. U hubso in aan barkinta mid ka mid ah telefoonada ah inta ay socoto kala iibsiga oo dhan. (Sidoo kale eeg: xiriirada Transfer ka iPhone in Samsung Galaxy )
Samsung oo ay taageerayaan iPhone OS oo lagu daydo
Laga soo bilaabo Android 2.1 in Android 6.0 Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2, Ogow 4, Ogow Galaxy 3, Ogow Galaxy 2, Galaxy Note, Galaxy S, Galaxy Ace, Galaxy Nexus, Galaxy Grand Duos, iyo in ka badan >>
macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5 iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS
Articles badan oo ku saabsan Samsung & iPhone
Bedelka Nokia Xiriirada in Samsung Galaxy S3
A Guide Full si ay u gudbiyaan Android inay iPhone 6
3 Siyaabaha Bedelka Old iPhone si iPhone 6
Bedelka Content ka Nokia in Android
Xiriirada Transfer in New Android Phone
Sida loo aqoonsado iPhone dayac tiray
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada, SMS, Music iyo More ka Samsung si iPhone